Tsingerintaonan’ny Rivopanovàna Silamo sy Ireo Iraniana Bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jolay 2017 9:00 GMT
Bilaogera maro no nanoratra mikasika ny fihetsehampony, ny zava-niainany sy ny heviny manokana mikasika ny Rivopanovàna Silamo, izay ankalazan'ny sasany ny faha-28 taonany ny 11 Febroary (2007) ary anenenan'ny sasany izany kosa. ‘Ndeha hijery sasantsasany amin'ireo lahatsoratra ireo.
Milaza i Mohmmad Ali Abtahi, lefitry ny filoha taloha sady pôlitisiana refôrmista, fa iray tamin'ireo zava-nitranga lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona ny Rivopanovàna Silamo[Fa] ”izay nanoloan'ny voninkazo ny bala.” Manampy izy fa ny firaisan'ny vahoaka dia mahatonga ity rivopanovàna ity ho tanteraka. Milaza i Abtahi fa tsy afaka ny hampihena ny lanjan'ny rivopanovàna ny eritreri-dratsin'ny vahoaka momba ny manampahefana amin'izao fotoana izao.
Mamaky fomba fijery hafa mikasika ilay rivopanovàna isika ao amin'ny ViewfromIran. Milaza ilay bilaogera:
Manazava ny antony nitrangan'ilay rivopanovàna[Fa] i Omid66. Manoratra izy:
Milaza i FM Sokhan, mpanoratra sy bilaogera, fa 28 taona taorian'ny rivopanovàna, isika mpanoratra dia tokony miafina sy mampiasa solonanarana mba hilazàna ny marina [Fa]. Manampy ilay bilaogera fa ny peniny no fitaovampiadiany ary ho solon'ny baomba, dia manana ny teny ry zareo.